I-Dreamtime Del Cabana + Iphuli - I-Airbnb
I-Dreamtime Del Cabana + Iphuli
Hikkaduwa , Galle, i-Sri Lanka
Ikamelo e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Supun And Mel
U-Supun And Mel Ungumbungazi ovelele
Izwa ukuhlala okuhlukile e-Dreamtime Del Cabana, enye yama-cabana amathathu akhiwe kucatshangwa ngemvelo. Zicwilise echibini lethu lamanzi anosawoti noma uthathe uhambo lwemizuzu emibili uye ogwini lolwandle bese ubuyela ku-cabana yakho ethokomele ezungezwe ingadi yasezindaweni ezishisayo. Indawo yethu yilapho ukungenisa izihambi okuqotho, imvelo kanye nesipiliyoni sangempela sihlangana khona.
Inhloso yethu: Ukudala indawo ekhululekile nekhaya e-Hikkaduwa yezivakashi zethu, sakhe eduze kwezihlahla futhi sigxile ekulondolozeni nasekungezeni imvelo yemvelo. Landela indlela eya kwelinye lama-cabana amathathu azimele. I-'Del' cabana iqanjwe ngesihlahla sethu esisithandayo engadini, isihlahla se-Del (breadfruit). Sicela uqaphele ukuthi le cabana ingumlandeli kuphela.
I-Dreamtime inama-cabana angu-3, amagumbi esabelomali angu-5, amagumbi ama-balcony angu-3 kanye nama-pool pool angu-2.
Nethezeka kuthala lakho futhi ujabulele indawo eshisayo. Ingadi yethu iyikhaya lezilwane eziningi zasendle: hlala ubhekile izinyoni zendabuko, izingwejeje, izibankwa, izinkawu nokunye! Lalela ukuhlabelela kwezinyoni namagatsha enyakaza emoyeni. Uma ukukhukhumala kukhulu uzwa ngisho namagagasi eqhuma buqamama. Kunezinhlobo eziningi zezitshalo esilahlekelwe ukubalwa kwazo. Izitshalo zasehlathini ziyachuma futhi isihlahla soqalo siwumgogodla wenkundla yethu.
Jabulela isidlo sasekuseni sase-Sri Lankan ekhefi yethu ekahle esilungiselelwa umakhelwane wethu njalo ekuseni.
Idizayini ye-cabana iwuhlelo oluvulekile olunomatilasi wasentwasahlobo onethezekile, ifeni yesilingi kanye nenetha lomiyane. Indlu yokugezela ifakwe ishawa yamanzi ashisayo kanye nezitshalo eziningi kunjalo!
I-cabana yethu iyindawo ekahle yokuphumula nokuphumuza umoya kanye nesisekelo esikahle sokuhlola konke okunikezwa yi-Hikkaduwa enhle. Jabulela imizuzu engu-15 yohambo lwasebhishi noma imizuzu emi-3 yokugibela i-tuk-tuk ukuya endaweni eyinhloko ye-surf. Sondela kuzimfudu zasendle, i-snorkel, ukutshuza, ukubhukuda futhi uhlole idolobha lendawo lase-Hikkaduwa.
Njengoba simaphakathi nezwe (uhambo lwemizuzu emibili nje ukuya olwandle), izivakashi zithola amazwibela empilo yasemaphandleni. Kuzoba khona ukumomotheka kokwamukela kanye nokubingelela okumbalwa okuvela ezinganeni ekuhambeni kwakho okufushane ukuya olwandle.
Ibungazwe ngu-Supun And Mel
Singumbhangqwana okhululekile ohlala esizeni. Uma singekho futhi mayelana nawe cishe uzosithola eduze kwechibi. Siyajabula ukuphendula noma imiphi imibuzo futhi sizokwenza konke okusemandleni ethu ukwenza ukuhlala kwakho kujabulise futhi kukhumbuleke. Sihlela izinkambo futhi sigcwele izeluleko mayelana nokuthi yini okufanele uyenze nokuthi ungadla kuphi endaweni.
Singumbhangqwana okhululekile ohlala esizeni. Uma singekho futhi mayelana nawe cishe uzosithola eduze kwechibi. Siyajabula ukuphendula noma imiphi imibuzo futhi sizokwenza konke ok…
USupun And Mel Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Hikkaduwa namaphethelo